Insect Sculptures Mgbasa Ozi - Imewe Mmewe
Mgbasa Ozi Ejiri aka ha kee ihe ọ bụla iji kee ihe ụmụ ahụhụ na gburugburu ha na nri ha na-eri. Ejiri ihe osise ahụ mee ihe dị ka oku iji mee ihe site na weebụsaịtị Doom matapụtakwa ụmụ ahụhụ dị n'ụlọ. Ihe ndị a ejiri mee ihe ndị a a kpụrụ akpụ bụ ndị a na-enweta site na yad, ndị a na-ekpofu ahịhịa, akwa mmiri na nnukwu ahịa. Ozugbo ụmụ ahụhụ chịkọtara, a na-ese ya ma zighachi ya na foto.
Aha oru ngo : Insect Sculptures, Aha ndị na-emepụta ya : Chris Slabber, Aha onye ahịa : Chris Slabber.
Ihe omuma na imeghari foto
Mgbasa Ozi Chris Slabber Insect Sculptures